Akụkọ - Mkparịta ụka maka ihe ngwọta dị na mmejọ dị iche iche nke granulator akọrọ
Mkparịta ụka banyere ihe ngwọta nke mmejọ dị iche iche nke granulator akọrọ
Dị ka anyị si mara, granules ọgwụ ọdịnala China nwere abaghị uru ọ bụla nke ihe ndị dị irè, arụmọrụ dị elu yana oriri ike dị ala mgbe emechara ya site na granulator akọrọ. Mana n'iji ya eme ihe, enwere nsogbu dị iche iche. Kedu otu esi edozi nsogbu ndị a kwa ụbọchị?
1. Onweghị ihe dị n'ime ụlọ na -ada ada na -akpata: akpọchiri modulator ma ọ bụ na -ejikọ ọdụ ụgbọ mmiri; Ngwa nnyefe dragon onye na -eri nri; A na -egbochi onye na -enye nri. Usoro mkpochapu bụ iwepụ ihe mkpuchi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri nri; Lelee ngwaọrụ nnyefe feeder auger ma wepu mmejọ ahụ; Hichaa ihe dị na auger nke feeder.
2. Ihe kpatara ọdịda nke akụrụngwa na -abanye n'ime ụlọ granulation mana ọ bụghị ịpịpụta ahụ bụ na akpọchiri oghere anwụ; Mmiri mmiri nke akụrụngwa dị oke elu, oghere dị n'agbata rollers buru oke ibu, onye na -akpụcha nri na -eyi akwa; Ejiji nke ebu dị njọ. Usoro mkpochapu: wepu ihe na oghere nwụrụ; Njikwa mmiri na akụrụngwa; Dozigharịa oghere nke mkpanaka anwụ wee dochie nchapu.
3. Enweghị ike ịmalite moto nke pelletizer. Ihe kpatara ya: enwere nchịkọta ihe n'ime ụlọ pelletizing. Enwere ihe adịghị mma na sekit ahụ; Mgbanwe njem agaghị emetụ aka na -arụ ọrụ na diski breeki ma ọ bụ ọnụ ụzọ.
Usoro mkpochapu: wepu ihe a kpokọtara; Lelee sekit ma wepu mmejọ ahụ; Lelee ngbanwe njem.
4. Ihe na -akpalite mkpọtụ na ịma jijiji siri ike: a na -emebi ihe nkedo, ihe mgbanaka mgbanaka agbachaala nke ọma, ma ọ bụ enwere okwu mba ọzọ na nri; Ihe ogwe ogwe osisi ahụ dị larịị. Nchọpụta nsogbu: dochie amị, dochie ala mgbali; Gbanwee oghere nke rola mgbali nke ọma.